नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि अध्ययन गर्दै सरकार — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि अध्ययन गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगका लागि समिति बनाएर अध्ययन शुरू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको हो ।
समितिमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग विभागका कानून शाखा प्रमुख, मेकानिकल इन्जिनियर, वातावरण तथा प्रविधि शाखाका निर्देशक र कम्पनी रजिस्ट्रारका प्रतिनिधि छन् ।
समितिले उद्योगीहरूसँग मिलेर नेपालमा गाडी एसेम्बलिङको सम्भावना, यसका फाइदा/बेफाइदा, पुरानो अभ्यास आदिको अध्ययन गर्नेछ । विभागमा यसअघि नै २२ उद्योग एसेम्बलिङका लागि दर्ता भइसकेकोमा राज्यले उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा कतिपय शुरू नै नभई बन्द भएका थिए भने कतिपय पछि बन्द भएका थिए ।
एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीको निवेदन लगानी बोर्डले गत चैत पहिलो साता स्वीकृत गरेसँगै नेपालमा एसेम्बलिङ उद्योगको चर्चा शुरू भएको थियो ।
उक्त कम्पनीसँग विभिन्न चरणको वार्ता भई रूपन्देहीको मोतीपुरमा सरकारले प्लान्टका लागि जग्गा दिने सहमति गरे पनि एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता हुन सकेको छैन ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्डमा हुँदाताका नै मोतीपुरमा एसेम्बलिङ प्लान्टका लागि कम्पनीसँग सहमति भएकोमा त्यसयता कम्पनीसँग छलफल हुन सकेको छैन । बोर्डका एक अधिकारीले कोभिडका कारण उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए ।
मोट्रेक्सको आगमनसँगै नेपालमै एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूले चासो देखाउन थालेका थिए । स्वदेशी उद्योगको चासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले यसको सम्भावनाको अध्ययन अघि बढाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
२०७७ पौष १ गते ०८:४४ मा प्रकाशित
आजैदेखि लागू हुनेगरि बैंकहरुले ल्याए नयाँ ब्याजदर, कुनको कति ?
धादिङ र गोरखाका ३५ सय ६० भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन रोक !
यस्तो छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५ बुँदे निर्देशन,के गर्न हुने, के नहुने ? (सूचिसहित)
आज दिउँसो ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्ने